Raharaham-pirenena Archives - Page 262 sur 296 -
Mihazakazaka ny toe-draharaha eo anivon’ny fikambanana AV7 taorian’ilay valan-dresaka an-gazety nataon’izy ireo farany teo tetsy Andrefanambohijanahary. Hiroso amin’ny fitoriana ireo olona miisa 19 nomelohin’ny Fitsarana ny volana Aogositra 2010 mantsy ny AV7 noho ny tsy …Tohiny
Hentitra ny fanambarana nataon’ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana taorian’ny fahatratrarana ny sambo “Lumina” nikasana hanondranana an-tsokosoko ireo andramena miisa 340. “Tsy tokony ho olom-bitsy no hisitraka ny harena sarobidy eto Madagasikara fa ny vahoaka malagasy. …Tohiny
10/02/2017 admintriatra 0
Taorian’ny fanapahan’ny filan-kevi-panjakana dia nidina teny amin’ny Epp Antanimbarinandriana ny minisitra ny Fanabeazam-pirenena, sy ny minisitra miandraikitra ny tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany, ny fampitaovana, omaly maraina. Nandritra ny dinika ho an’ny mpanao gazety, …Tohiny
Teratany karana iray antsoina hoe Moustapha Ameralli Alibay Radjan no nisy nitifitra tetsy Analamahitsy omaly maraina. Telolahy araka ny vaovao azo no nanatanteraka izao fitifirana izao ka roa nandeha moto cross, ny fahatelo kosa nandeha ...Tohiny